ဗိုလ်ကြီးကြောင့် ရဲမေလေး ”အား.. ဗိုလ်ကြီးနာတယ်.. နာတယ်” ဆိုတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် | BurmeseAsia
Home News ဗိုလ်ကြီးကြောင့် ရဲမေလေး ”အား.. ဗိုလ်ကြီးနာတယ်.. နာတယ်” ဆိုတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်
ဗိုလ်ကြီးကြောင့် ရဲမေလေး ”အား.. ဗိုလ်ကြီးနာတယ်.. နာတယ်” ဆိုတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်
“ ရဲမေလေးရဲ့ ” အား ….. ဗိုလ်ကြီးနာတယ် ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင် အောက်ဆုံးတွင်ပါဝင်သည်။
မထင်မှတ်ဘဲဖြစ်တဲ့အဖြစ်အပျက်လို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်တယ်။ရဲမေ ခမျာ ဘယ်လောက်တောင်နာလိုက်မလဲ။
ခင်ဗျားတို့စဉ်းစား သာကြည့်ကြပါတော့ဗျာ …လက်ဖျား လက်နား တံခါးညှပ်တယ်ဆိုတာ….
ဘာများ လဲဆိုပြီး ဝင်ကြည့်လိုက်တာ ဟာသ သက်သက် ရယ်မောစေရန် တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်တဲ့ အတွက်….
သီလ လုံခြုံစွာ မဆဲမဆိုပဲ အသက်လဲရှည် ရယ်မောရုံ သက်သက်လေးသာ ဟဟ ပေးသွားကြပါဗျာ…..
ဆဲတယ်ဆိုတာ ကြားတဲ့သူလဲ မကောင်း ဆဲတဲ့ ခင်ဗျားတို့ အတွက်လဲ အမြင်မတင့်တယ်ပါဘူး သိတယ်မလား….
ရယ်မောခြင်းခြင်းဖြင့် တစ်နေ့တာပင်ပန်းမှု့တေ ပြေပျောက်ကြပါစေ….။
“ ရဲမလေေးရဲ့ ” အား ….. ဗိုလျကွီးနာတယျ ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုငျ အောကျဆုံးတှငျပါဝငျသညျ။
မထငျမှတျဘဲဖွဈတဲ့အဖွဈအပကျြလို့တောငျပွောလို့ရပါတယျတယျ။ရဲမေ ခမြာ ဘယျလောကျတောငျနာလိုကျမလဲ။
ခငျဗြားတို့စဉျးစား သာကွညျ့ကွပါတော့ဗြာ …လကျဖြား လကျနား တံခါးညှပျတယျဆိုတာ….
ဘာမြား လဲဆိုပွီး ဝငျကွညျ့လိုကျတာ ဟာသ သကျသကျ ရယျမောစရေနျ တငျဆကျပေးတာဖွဈတဲ့ အတှကျ….
သီလ လုံခွုံစှာ မဆဲမဆိုပဲ အသကျလဲရှညျ ရယျမောရုံ သကျသကျလေးသာ ဟဟ ပေးသှားကွပါဗြာ…..
ဆဲတယျဆိုတာ ကွားတဲ့သူလဲ မကောငျး ဆဲတဲ့ ခငျဗြားတို့ အတှကျလဲ အမွငျမတငျ့တယျပါဘူး သိတယျမလား….
ရယျမောခွငျးခွငျးဖွငျ့ တဈနတေ့ာပငျပနျးမှု့တေ ပွပြေောကျကွပါစေ….။
Previous articleအရေးတော်ပုံအောင်ရမည် ဟုဆိုကာ လူမှုကွန်ယက်မှ တဖန်ပြန်လည်ပေါ်လာတဲ့ ပရိတ်သတ်အချစ်တော် မင်းသားချော နေတိုး
Next articleနိုင်ငံခြားမှာ လက်သုံးချောင်းထောင်ပြီး Branded ပစ္စည်းမျိုးစုံစိတ်ကြိုက်ဝယ်ကာ ဈေးဝယ်သပိတ်လုပ်နေတဲ့ နေခြည်ဦး